Somaliland oo Suldaan Wabar ku dacweysay Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareg.com: Wasiirka Arrimaha Dibadda maamulka Somaliland, Maxamed Biixi Yoonis, ayaa sheegay inay dawladda Itoobiya kawada hadleen arrinta Suldaan ku kacsan maamulka, kaasoo ciidan ku heysta dhulka buuraha ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Wasiir Maxamed Biix ayaa sheegay in dowladda Itoobiya u ballanqaaday maamulka Somaliland iney tilaabo ka qaadi doonto Suldaan Wabar oo ku dhaqaaqay kacdoon ka dhan ah maamulka Somaliland, islamarkaana maleeshiyo taabacsan ay weeraratay ciidamada maamulka Somaliland.
“Arrintaa dawladda Itoobiya waanu kala hadalay waxaanay dawladda Itoobiya noo balan qaaday in ay tallaabo deg deg ah ka qaadayaan maleeshiyadaasina waxaay ahayd dablay nabad-diid ah oo si tuugo ah Itoobiya ugu dhuumanaysay, markaa arrintaasi si dhakhso ah ayay u soo af-jarmaysaa,” ayuu yiri Wasiir Maxamed Biixi oo la hadlay warbaahinta maamulka Somalilan.
Mudane Maxamed Biixi waxa uu sheegay in labada dhinacba talaabo ka qaadayo Kooxda Wabar “Somaliland iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsani oo ay ka mid tahay inaan la isu qarin cid cadaw ku ah cidda kale” ayuu yiri Maxamed Biixi.
Wasiirku waxa uu ku dooday inaanay Xiriirka labada dal waxba u dhimayn Kooxda gudaha Ethiopia kaga soo duulaysa Somaliland, wuxuuna yiri “Wax ay arrintaasi u dhimayso xidhiidhka wanaagsan ee labada dinac ka dhexeeyaana ma jirto, Somaliland-na kama suura galayso in Itoobiya cid cadaw ku ahi soo dhex marto oo ay ku duusho Itoobiyana dhankeeda way balan qaaday waxaanay noo caddaysay in arrinta dhacday ay ahayd mid ay sameeyeen koox dhuumasho ugu kala gudubtay labada dal waxaanay ballan qaad buuxa ku bixisay dawladda aanu jaarka nahay ee Itoobiya in si midaysan dhan looga soo wada jeesto cid kasta oo lid ku ah nabad gelyada iyo iskaashiga labada waddan.”
Wasiirku waxa uu intaasi raaciyay “ Arrinta kooxdan nabad-diidka ahna tallaabo cad inay ka qaadayaan ayay noo caddeeyeen, Somaliiland iyo Itoobiyana way ka midaysan yihiin ka hor tagga wax kasta oo wax yeelo ku keenaya ama wax u dhimi kara nabad gelyada guud ahaan mandaqada gaar ahaan labada waddan,”ayuu yidhi Wasiirka Khaarajigu.
Suldaan Wabar oo kasoo jeeda gobolka Awdal ayaa horay u shaaciyey inuu ka goostay maamulka Somaliland, isagoo maamulkaas ku eedeeyey inuu gacan bidixeyn ku hayo dadka ku nool gobolka Awdal.